Cara Delevingne, Ashley Benson anonzi akaroora muchiitiko chakavanzika - Macelebs
Supermodel Cara delevingne uye mutambi Ashley Benson vatora hukama hwavo padanho rinotevera. Zvinoenderana neshumo kubva ku Svondo Sun , vakadzi vakatengesa mhiko 'kutanga kwegore rino' mumhemberero yepamusoro yepamusoro muLas Vegas.
Sonia Recchia / Getty Mifananidzo yeRBC
Chinyorwa ichi chinoti michato yavo yakaburukira muchokwadi Sin City maitiro. Vakatengesa mhete ku Little Vegas Chapel inozivikanwa, uko kwavakanzi 'mukadzi nemukadzi' naElvis anoteedzera. Panzvimbo pekuita vese echinyakare chena machato, vachati vese vakapfeka nhema. Ashley akapfeka shangu dzakakwirira uye akatakurawo maruva.
Mufananidzo Wakanakisa / BACKGRID
Uye kwete, iyi yakanga isiri nyaya yakavanzika. Vashoma vashanyi vanogona kunge varipo, yeBritish tabloid yakawedzera, kusanganisira Charlize Theron, Sophie Turner naJonas Brothers. Mushure memhemberero yapera, vakatyaira kubva kushindig vakapfeka pink Cadillac.
Chaizvo zvakadii kupemberera uku kwakabhadhara mamirionea? Mari inokwana madhora mazana matatu!
Michael Kelly, muridzi wechechi iyi, akaudza Zuva, 'Vaive nechokwadi nezvezvavari kuita uye vaive nechokwadi nezvezvavanoreva kune mumwe nemumwe ... Vakanga vachinyemwerera zvikuru kumeso kwavo.'
soulja mukomana uye blac chyna
Vakanga vakazvipira kune mumwe nemumwe uye vaive nekunyemwerera kukuru kumeso kwavo.Waigona kuona kuti vairevesa pane zvavaiita asi vachinakidzwa zvakanyanya. Vaida kuti ive yakapfava, yakanyarara uye yakapusa. '
Musi waAugust 4, E! Nhau akataura kuti vakadzi vacho havana kuroorwa zviri pamutemo. Imwe sosi yakaudza E! Nhau dzekuti ivo vaive neiyo webhusaiti inozivikanwa se 'chiitiko chinonakidza cheushamwari rinenge gore rapfuura.' E! inosimbisa kuti rezenisi remuchato reyeredzi harisi chikamu chevanhu rekodhi.
Ashley naCara vakatanga kubatanidzwa munaJune 2018 asi havana kuratidza hukama hwavo kusvika muna Chikumi 2019. 'Handizive nekuti itsika, kwave nemakore makumi mashanu kubva zvakaitika Stonewall uye ini handizive,' Cara akaudza E! Nhau kwekuti nei ivo pakupedzisira vakasarudza kuenda kuruzhinji nezve kwavo kudanana pane yavo yekutanga gore. 'Chave chingori chinguva chedu chegore rimwe chete kuyeuka saka, wadii?'
Ona kuti Mariah Carey akapemberera sei zuva rake rekuzvarwa: Mifananidzo
Courtney Stodden anotaura kurambana: Hapana prenup naDoug Hutchison, ndiye aive muriritiri
Caitlyn jenner achidzokera pakuva murume
mariah carey yekudyidzana rin'i yakakosha
huchi boo boo amai pamberi nepashure